Umkhiqizi Webhokisi Lezinhlaka Ezihlanganayo, Okulungele Ukupakishwa
Imikhiqizo yamabhokisi weTinangular Tin
Amabhokisi wetiye we-metal rectangular tin asetshenziswa kabanzi etiyeni, ukudla, amabhisikidi, izimonyo, noma ama-ashtrays. Noma ngabe ngokuya ngokufakwa, iphethini nokuklanywa kwesiqukathi se-tin esingunxantathu kuhambelana kakhulu nezidingo zomphakathi wamanje, futhi ukwanda okuphelele kuphezulu.
Amabhokisi wesipho esincanyane esincanyane e-Square Lidalekile Wokubekelela Imibono
Ikhasinkomba 1 of 41234
Kungani Amabhokisi Amanqamu Wenqenqema ebalulekile emaphaketheni?
Izinzuzo ze amabhokisi enziwe ngoxande: Eyokuqala ukuthi kube lula, impumelelo yamabhokisi we-tin a-rectangular echibini ukupakisha muhle, ukusebenza kwesitoreji kuyinto enhle kakhulu, futhi ukuqina kuphezulu. Ngokuvamile, uma ibhokisi le-tin elingunxande lisetshenziselwa ukupakisha, umphumela womswakama-ubufakazi ulungile, ngakho-ke amabhisikidi, noma itiye, noma imikhiqizo ye-skincare. Konke lokhu kungafaka ukupakishwa kwebhokisi le-tin.
Ngasikhathi sinye, itini lokulondoloza elingunxantathu lingathambisa umsebenzi onamandla wokulwa nokulwa mbumbulu. Ukusetshenziswa nenani lokusetshenziswa kwethayi elingunxande kuyindlela yokwandisa inani lesitoreji sayo sangaphakathi. I-tin yensimbi enxande engatheni iyiphakheji enobungozi yemvelo esebenza kahle ngokulahla imfucuza. Vikela itiye, ukudla, izimonyo, njll. Izimpahla zivikelwe ezintweni zemvelo ezifana nelanga, umoya, imvula nothuli, futhi zivikele ekulahlekelweni ngamandla, ukuvuza, ukuncibilika, ukubopha, ukushayisana, ukuchitheka, ukulahleka kanye nokweba.
Izitsha ezinkulu zama-rectangular tin zenziwe nge-tinplate njengezinto ezingavuthiwe. Bangamabhokisi okufaka enziwe izinqubo ezahlukahlukene njengokufisela i-welding noma i-stamping kanye ne-kifungo.
Amakhasimende amukelekile ngokwengeziwe emgqonyeni webhokisi lesimbi lebhisikidi enziwe ngemibala namaphethini. Ngopende wokuqhekeka oshukumisayo, umkhathi uqhakazile, okwenza abathengi bathandane ekuqaleni, kuwumkhiqizo omuhle kakhulu wokufaka ofanele ukuqoqwa. Kusetshenziswa i-tinplate njengezinto ezisetshenziswayo, kunomthelela omkhulu ekuphikiseni nasekuqhekekeni. Xazulula inkinga yokuba brittleness kuwe, ukuze umkhiqizo wakho uhanjiselwe umthengi ngokuphelele